एक ट्याब्लेट औषधि पनि धमिराले खाएको छैन : डा आचार्य
डा विजयचन्द्र आचार्य चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक हुन्। अस्पतालमा राखिएको रक्त क्यान्सरको औषधि धमिराले खाएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्यखबरले निर्देशक डा आचार्यसँग यो विषयमा कुराकानी गरेको छ।
अस्पतालमा राखिएका रक्त क्यान्सरका औषधि धमिराले खाएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यथार्थ के हो?
अस्पतालमा रहेको एक ट्याब्लेट औषधि पनि धमिराले क्षति गरेको छैन। यो विषयमा अनावश्यक रुपमा बढी हल्ला फैलाइएको मात्र हो।
तर, धमिराले औषधिमा असर गरेको तस्बिर नै सार्वजनिक भएका छन् त?
धमिराले औषधिका कार्टुनमा क्षति गरेको पक्कै हो। तर, औषधिमै असर पर्नेगरी क्षति गरेको भन्ने होइन। औषधि राखेको ठूला कार्टुनमा धमिराले खाएको देखेपछि हामीले तुरुन्त त्यहाँबाट हटाएर सुरक्षित स्थानमा राखेका छौं। औषधिको ठूला कार्टुनभित्र साना बट्टा हुन्छन्। अनि ती साना बट्टाभित्र मात्र औषधि हुन्छ। धमिराले ठूला कार्टुन र कार्टुनभित्रका केही साना बट्टामा मात्र क्षति गरेको हो। सबैभन्दा भित्र रहेका औषधिका ‘स्ट्रिप’मा होइन।
जहाँसम्म तस्बिरको कुरा छ, अस्पताललाई बदनाम गराउन धमिराले खाएको कार्टुनमा औषधिका केही स्ट्रिप राखेर खिचिएका हुन्। औषधि नै क्षति भयो भनेर गलत कुरा प्रचार गरिएको हो।
धमिरा लाग्ने स्थानमा औषधि राखेकाले यस्तो भएको हो?
क्यान्सर अस्पताललाई अमेरिकाको म्याक्स फाउन्डेसनले औषधि सहायतास्वरुप दिँदै आइरहेको छ। खोप लगायत अन्य केही औषधिमा झैँ ‘कोल्ड चेन मेन्टेन’ भएका कोठामा यी औषधि राख्नु पर्दैन। अन्य सामान्य औषधिसरह यी औषधि पनि स्टोरमा राखिएको छ। हाम्रो स्टोरमा रहेका औषधिमा धमिराको समस्या देखिएको पनि होइन। बिरामीको सहजताका लागि ओपिडीमा थोरै संख्यामा राखिएका केही कार्टुनमा समस्या देखिएको हो। बिरामीलाई स्टोरमा औषधि लिन पठाउनु राम्रो नहुने भएका कारण हामीले ओपिडीमा थोरै कार्टुन औषधि राख्दै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। त्यहाँ काठमाथि औषधि राखिएका कारण धमिराले कार्टुनमा क्षति गरेको हो। क्यान्सर अस्पतालमा धमिराको समस्या अत्यधिक छ। त्यही भएर हामीले सुरक्षित उपाय अपनाउँदै आइरहेका छौं।
हामी हरेक दिन औषधिको निगरानी गर्छौँ । यति गर्दागर्दै पनि सजकता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि धमिराले कार्टुनमा क्षति गरेछ। हामीले समयमा नै त्यसलाई पत्ता लगाउन सकेका कारण सुरक्षित स्थानमा सार्न सफल भयौँ।
ओपिडीमा राखिएको कार्टुनमा धमिरा लाग्ने अवस्था आउनु त व्यवस्थापकीय कमजोरी होइन र?
यी औषधिको सम्पूर्ण जिम्मा मेडिकल अंकोलोजी विभागकी प्रमुख डा जया श्रेष्ठलाई दिइएको छ। उहाँको हस्ताक्षरपछि मात्र बिरामीको क्यान्सर प्रमाणितपत्र अनुसार मात्र औषधि वितरण हुन्छ। त्यसकारण धमिराले कार्टुनमा क्षति पुग्ने अवस्था आएको विषयमा उहाँहरुसँग छलफल गर्नेछु। आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने वातावरण बनाउन भनिकसेका छौं।
औषधिमा भोलिका दिनमा असर नपरोस् भन्नका लागि अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
औषधिलाई सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन हामीले स्टिलको दराजमा औषधि राख्न थालिसकेका छौं। यसका साथै यो विषयमा पनि आन्तरिक छानबिन सुरु गरिसकेका छौं। औषधिमा क्षति नपुगे पनि कार्टुनमा क्षति देखिएका कारण हामीले छानबिन अगाडि बढाएका हौँ। छानबिनका क्रममा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नेछौं।
१. छाति दुखाइपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना अभिनेत्री ऋचा शर्माको अवस्था सामान्य
२. नायिका ऋचा शर्मालाई हार्ट अट्याक, नर्भिकमा भर्ना
३. उत्तरी खोटाङमा निःशुल्क विशेषज्ञ घुम्ति स्वास्थ्य शिविर
४. डा केसीबारे भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएका विषय र तथ्यहरू
५. चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको आग्रह
६. डा केसी र चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे कांग्रेस नेता गगन थापाको पत्रकार सम्मेलन [लाइभ]
७. माफियाको आत्मस्वीकृति: कुर्न गाह्रो हुँदो रहेछ (कविता)
८. नर्सिङ सङ्घले ल्यायाे विपद्का समयमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिने 'मोबाइल एप्स'
९. छानबिन समिति गठन भएपछि सगरमाथा अञ्चल अस्पतालकाे तनाव साम्य, शवको पोष्टमार्टम धरानमा गराइने
१०. जनकपुर अस्पतालको दुरावस्था : भेटिँदैनन् चिकित्सक, मारमा बिरामी